Roob ka da'ay Muqdisho oo saameyn yeeshay | KEYDMEDIA ONLINE
Roob ka da’ay Muqdisho oo saameyn yeeshay
Qoysaska Barakacayaasha ayaa xiligii uu roobka da’ayay raadsaday meelo ay ka galaan dhibcaha Roobka iyo qabowga uu wato, kadib markii guryahooda ku rogmaday daadadka biyaha.
MUQDISHO, Soomaaliya - Magaalada Muqdisho waxaa xalay saqdii dhexe ka da’ay roob xooggan oo midka Deyrta ah, oo saacado socday, kaasoo saameyn weyn ku yeeshay isku socodkii dadweynaha iyo dadka barakacayaasha ah, oo guryahooda biyo buuxsameen.
Roobka ayaa jaray waddooyin muhiim ah oo magaalada Muqdisho, waxayna taasi keentay in gaadiid badan ay ka baqaan ku socoshada biyaha. Dadka barakacayaasha ah ayaa u baahan gurmad degdeg ah oo waliba dhan walbo ah, waxaana hadda ugu daran meel ay gambaad ka dhigtaan si iyaga iyo carruutooda aanu u saameyn roobka kale ee imaan kara.
0 Comments Topics: muqdisho roobabka muqdisho
Qarax kale oo Muqdisho ka dhacay
Warar 18 November 2020 9:00
Warar 17 November 2020 14:31